အကောင်းဆုံး GJCNC-BP-50 ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ။ | Gaoji
1. ထိန်းချုပ်မှုဝင်ရိုး:3ဝင်ရိုး
2. output ကိုအင်အား: 500kn
3. လာကြတယ်မြန်နှုန်း: 120HPM
၄။ မက်စ်ထိုးနှက်ခြင်း: ၃၂ (အထူ ၁၂mm)
၅။ Max Busbar အရွယ်အစား - ၆၀၀၀ * ၂၀၀ * ၁၅ မီလီမီတာ
အထူးသဖြင့်ဘတ်စ်ကားရှည်များအတွက်အလွန်ထိရောက်မှုရှိသောဤစက်ကိရိယာများသည်ညှပ်များကိုအလိုအလျောက်အစားထိုးနိုင်သည်။ ဤစက်ကိရိယာများသည်စာကြည့်တိုက်တွင်သေဆုံးသွားသောအခါဤစက်ကိရိယာများသည် (ပတ်ပတ်လည်အပေါက်၊ oblong အပေါက်စသည်ဖြင့်) ထိုးခြင်း၊ ညှပ်ခြင်း၊ အချောအလုပ်ပြုတ်သူကကယ်နှုတ်လိမ့်မည်။
ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာ CNC ကွေးနဲ့ကိုက်ညီပြီး busbar အပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လိုင်းကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။
GJ3D သည် busbar အပြောင်းအလဲအတွက်အထူးကူညီသည့်ဒီဇိုင်းဆော့ဝဲဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရာသည်အလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်စက်ကုဒ်နံပါတ်၊ အပြောင်းအလဲအတွက်နေ့စွဲတိုင်းကိုတွက်ချက်နိုင်မည်၊ ၎င်းအား busbar ခြေလှမ်း၏ပြောင်းလဲမှုကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ပုံရိပ်ကိုပြသနိုင်သည်။ ဤစာလုံးများသည်စက်ဘာသာစကားဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောလက်ကိုင်သင်္ကေတများကိုရှောင်ရှားရန်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြသနိုင်ပြီးမမှန်ကန်သောသွင်းအားစုများကြောင့်ပစ္စည်းအမှိုက်များကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကုမ္ပဏီသည်ဘတ်စ်ကားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ 3D ဂရပ်ဖစ်နည်းပညာကိုအသုံးချခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အာရှ၌အကောင်းဆုံး cnc control နှင့် design software ကိုသင့်အားတင်ပြနိုင်ပါပြီ။
ပိုကောင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်ပိုမိုအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်။ ဒီပစ္စည်းကိရိယာမှာ 15-RMTP ရှိပြီးလူ့ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်ပါ။ ဒီယူနစ်နှင့်အတူသင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသတင်းအချက်အလက်ရှိနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်မည်သည့်နှိုးစက်ဖြစ်ပျက်နှင့်တစ်ခုတည်းလက်ဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မယ်။
သငျသညျပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ setup ကိုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြေခံ die parameters တွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါက။ ရက်စွဲကိုဤယူနစ်နှင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
တည်ငြိမ်ပြီးထိရောက်သော၊ တိကျမှုနှင့်သက်တမ်းရှည်သောစက်မှုဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောတိကျသည့်ဘောလုံးဝက်အူ၊ ထိုင်ဝမ်မှတိကျသော linear လမ်းညွှန်နှင့် YASKAWA မှ servo စနစ်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောညှပ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးသည်သင်လိုအပ်သလောက်ဂီယာစနစ်ကိုဖန်တီးပေးသည်။
အထူးသဖြင့်ဘတ်စ်ကားဘားကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် clamp စနစ်ကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်အော်တို - တင်အစီအစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်သည်။ ထို့အပြင်အော်ပရေတာ၏လုပ်ငန်းကိုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ပိုမိုတန်ဖိုးကိုဖန်တီးပါ။
GJCNC-BP-50-8-2.0 / SC (လက်သီးခြောက်ခု၊ ညှပ်နှိပ်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း)
GJCNC-BP-50-8-2.0 / C (ရှစ်လက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်း၊ ညှပ်ခြင်း)
နောက်တစ်ခု: CND ကြေးနီလှံတံကွေးစက် 3D ကွေး GJCNC-CBG
အတိုင်းအတာ (mm) 7500 * 2980 * 1900 အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 7600 လက်မှတ် CE ISO
အဓိကပါဝါ (kw) ၁၅.၃ input ဗို့အား 380 / 220V ပါဝါအရင်းအမြစ် ဟိုက်ဒရောလစ်
output စွမ်းအား (kn) 500 လာကြတယ်မြန်နှုန်း (hpm) 120 ထိန်းချုပ်မှုဝင်ရိုး 3
အများဆုံးပစ္စည်းအရွယ်အစား (mm) 6000 * 200 * 15 မက်စ်ထိုးကြိတ်သေဆုံးသည် ၃၂ မီလီမီတာ (အထူ ၁၂ မီလီမီတာအောက်ရှိအထူ)
တည်နေရာမြန်နှုန်း(၀ င်ရိုး) ၄၈ မိနစ် / မိနစ် လာကြတယ်ဆလင်ဒါ၏လေဖြတ် 45mm ထပ်ခါတလဲလဲ positioning ကို ± 0.20mm / m
မက်စ်လေဖြတ်ခြင်း(မီလီမီတာ) X ဝင်ရိုးY ဝင်ရိုးZ ဝင်ရိုး 2000530350 ပမာဏ၏သေသည် လာကြတယ်ညှပ်ဖောင်းကြွ ၆/၈၁.၁၁/၀
PLC OMRON တိကျစွာ linear လမ်းညွှန် ထိုင်ဝမ်ဟိုင်း
အာရုံခံကိရိယာ Schneider လျှပ်စစ် တိကျသောဘောလုံးဝက်အူ (4th series) ထိုင်ဝမ်ဟိုင်း
Control ခလုတ် OMRON ဘောလုံးကိုဝက်အူထောက်ခံမှု beaning ဂျပန် NSK
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် OMRON ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများ
ကွန်ပျူတာ Lenovo High- ဖိအားလျှပ်စစ်သံလိုက် Valve အီတလီ
AC Contactor ABB မြင့်မားသောဖိအားပြွန် အီတလီ MANULI
တိုက်နယ်အနိုင်အထက် ABB မြင့်မားသောဖိအားစုပ်စက် အီတလီ
Servo မော်တာ YASKAWA ထိန်းချုပ်မှုဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့် 3D အထောက်အပံ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ GJ3D (ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့် 3D အထောက်အကူပြုဆော့ဖ်ဝဲ)
Servo ယာဉ်မောင်း YASKAWA